रूसमा प्रत्यक्ष विश्वकप फुटबल हेर्ने नेपालीको संख्या कति? | Suvadin !
रूसमा प्रत्यक्ष विश्वकप फुटबल हेर्ने नेपालीको संख्या कति?
Nepalese in Russia
सबै समर्थकहरूको अा–अाफ्नै रोजार्इ छ। कति व्यक्तिहरू भने कुनै एउटा देशको मात्र समर्थन नगरेर रमाइलोका लागि प्रभावसाली देशहरूको समर्थन गरेको पनि पाइन्छ। कोही जर्मनीको समर्थन गर्छन र यस पटकको उपाधी जर्मनीले नै लग्ने भनेर अाशावादी छन् भने कतै अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेस्सीका ठूला समर्थकहरुको भिड छ। कतै विश्वकै महंङगा खेलाडी ब्राजिलका स्ट्राइकर नेयमारको चर्चा छ।
Jun 12, 2018 16:44
काठमाडाैं, २९ जेठ – विश्वकप फुटबल शुरू हुन अब मात्र २ दिन बाँकी रहेको छ। यतिबेला जता ततै विश्वकपको चर्चा चलिरहेको छ। बालबालिकादेखि वृद्धासम्मले रूचाउने फुटबलले टोल–टोलका बस्तीहरूमा नयाँ उर्जा निम्त्याएको छ। नेपालमा रहेका समर्थक मात्र नभएर विदेशी भुमिमा विभिन्न कारणले पुगेका नेपाली समर्थकहरु समेत निकै उत्साहित देखिन्छन्।
सबै समर्थकहरूको अाफ्नै रोजाइ रहेको छ। कति व्यक्तिहरू भने कुनै एउटा देशको मात्र समर्थन नगरेर रमाइलोका लागि प्रभावसाली देशहरूको समर्थन गरेको पनि पाइन्छ। कोही जर्मनीको समर्थन गर्छन र यस पटकको उपाधी जर्मनीले नै लग्ने भनेर अाशावादी छन् भने कतै अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेस्सीका ठूला समर्थकहरुको भिड छ।
कतै विश्वकै महंङगा खेलाडी ब्राजिलका स्ट्राइकर नेयमारको चर्चा छ। यसबीच पोर्चुगलको विश्वकपमा खासै चर्चा नभएता पनि ५ पटकसम्म बालोन डि’ओर जितेका क्रिष्टियानो रोनाल्डोका समर्थकहरुले पनि उपाधिको आशा भने मारेका छैनन्। त्यस्तै यसपाली स्पेन र प्रान्सको पनि सम्भावना रहेको समर्थकहरू बताउछन्।
३२ राष्ट्रका ७ सय ३६ खेलाडी सहभागी हुने विश्व फुटबलको महाकुम्भमा चर्चित खेलाडीहरुका जर्सी सर्वाधिक बिक्री हुन थालिसकेका छन्। युवादेखि लिएर बालबालिकाहरू समेत जर्सीमा देखिन थालेका छन्।
विश्वकप फुटबल रसियामा हुँदै गर्दा त्यहाँ विभिन्न सिलसिलमा रहेका करिब १ हजार नेपालीहरु कत्तिको उत्साहित छन् त? स्टेडियममा नै पुगेर प्रत्यक्ष फुटबल हेर्नेको संख्या कस्तो छ? फुटबलको महाकुम्भ शुरु हुनै लाग्दा रसिया कसरी सिंगारिएको छ? भन्ने कही जिग्यासाहरूलार्इ समेट्ने प्रयास गरेका छाैं।
विश्वकपकै शुभारम्भ खेल खेलाइने मस्को शहर दुलही झै सिंगारिएको छ। यस शहरमा रहेको २ रंगशालामा विश्वकप खेलाइनेछ। रसिया सरकारले ठूलो खर्च खेलकुदमा र विश्वकपको दैरान सुरक्षाका लागि खर्चिएको छ। खेल हुने विभिन्न शहर तथा स्टेडियम विशेषरुपले सजाइएको छ।
रसियामा झन्डै १ हजारको हाराहारीमा नेपालीहरु छन्। बिचौलियाको फन्दामा परेका वा अन्य युरोपेली मुलुकहरु छिर्न भनी लुकेर सम्पर्कमा नआएका झन्डै डेढ-दुई सयको संख्यामा पनि नेपालीहरु रहेको पनि अनुमान छ।
३०-४० जना नेपालीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा स्टेडियम पुगेर विश्वकप हेर्ने अनुमान छ। आ-आफ्नो स्टेटमा नेपालीहरुको छुट्टाछुट्टै समूहहरु छन्। उनीहरु आ-आफ्नो परिवार वा टिम मिलाएर खेल हेर्ने योजनामा देखिन्छन्।
रसियाका विभिन्न शहरहरुमा प्रतियोगिता हुने हुँदा आफ्नो नजिक पर्ने स्टेडियमबाट उनीहरुले खेल हेर्नेछन्। फुटबलप्रति अलि बढी लगाव र चासो हुने एउटै व्यक्तिले ४-५ वटा खेलका टिकटहरु पनि लिएका छन्।
४० डलरका होटल रुम, ४ सय पुगे
मस्कोका केही नेपालीहरुले टिकट नपाएपछि बाहिर पुगेर पनि फुटबल हेर्ने योजना बनाएका छन्। विश्वकपको अवसरलाई छोप्दै मस्को बाहिर भएपनि उनीहरुले टिकटहरु लिएका हुन्। तर, अहिले विशेष समस्या होटलको देखिएको छ।
पहिले ४०-५० डलरमा पाइने होटलका रुमहरु अहिले महंगिएर ४ सय डलरसम्म पुगेका छन्। अझै समयमा नै बुक नभए, त्यही पनि पाउन मुश्किल छ। तर, खर्च गरेर नै भए पनि विश्वकप हेर्ने नेपालीहरुको उत्साह भने मरेको छैन।
विश्वकप हेर्न नेपालीहरु रसिया आइपुगे
विश्वकपको माहोल नेपालमा झन् व्यापक छाएको छ। फुटबल हेर्नका लागि केही नेपालीहरु मस्को आइसकेका छन्। नेपालबाट आउने धेरै जनाले आफन्त, साथीभाइ र एनआरएनका प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क गरेका छन्। त्यस्तै कोका कोलाले पनि ४० जना भाग्यशाली विजेताहरूलार्इ विश्वकपको टिकट उपलब्ध गराएको छ।
नेपालबाट प्रत्यक्ष खेल हेर्न आउनेहरु, खेलको मितिअनुसार नै रसिया आउने बताइरहेका छन्। नेपालबाट विशेषगरी डिस्टिलरी कम्पनीहरुबाट पाइएका उपहार टिकट पाउनेहरु नै आउने क्रम रहेको बुझिएको छ। अन्य केही खेलप्रेमी तथा पत्रकारहरु पनि आउने बुझिएको छ।